विहिवार तुलसीपुरमा वृहत स्वास्थ्य शिविर, एक सय जना मोतियाविन्दु लागेकाको निशुल्क अपरेशन हुने - Tulsipur Online
विहिवार तुलसीपुरमा वृहत स्वास्थ्य शिविर, एक सय जना मोतियाविन्दु लागेकाको निशुल्क अपरेशन हुने
Posted by News Desk | ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार ११:४१ |
३० फागुन / तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १ को पवननगरमा विहिवार वृहत स्वास्थ्य शिविर हुने भएको छ ।
तुलसीपुुरलाई मोतियाविन्दुमुक्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नका लागि १ सय जनाको निशुल्क अपरेसन समेत गरिने भएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मोतियाविन्दुमुक्त क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नका लागि शिविरको आयोजना गरिएको उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले वताए ।
उनले अपरेसनका लागि पूर्व चेकजाँच भएका विरामीहरुलाई मात्रै अपरेसन गरिने पनि जानकारी दिए । ‘हामी केही दिनदेखि अपरेसन गर्ने विरामीहरुको छनोट गरिरहेका थियौ सबैको अव अपरेसन हुन्छ ’ डा. दाहालले वताए ।
उनले मोतियाविन्दुमुक्त नगरका रुपमा विकास गर्नका लागि अभियानको समेत सुरुवात हुने वताए । मोतियाविन्दुको अपरेसनका लागि वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतको समुह तुलसीपुर आइसकेको छ । अभियानको सुरुवात भएपछि हरेक वडामा गएर अपरेसन गरिने समेत जनाइएको छ ।
त्यसैगरी विश्व मृगौला दिवसका अवसरमा मृगौला रोगको परिक्षण र उपचार समेत हुने भएको छ । स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दाहालका अनुसार सेवाग्राहीको पिसाव चेकजाँच गरेर केही खरावी देखिए रगत समेत चेकजाँच गरी उपचार गरिने छ ।
मृगौला रोगको परिक्षणका लागि वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषि काफ्लेको समुह पनि तुलसीपुर आइसकेको छ । यसैगरी शिविरमा महिलाको पाठेघरको क्यान्सरका साथै महिलासँग सम्वन्धित अन्य रोगहरुको पनि परिक्षण गरिने डा. दाहालले वताए ।
नेपाल नेत्रज्योति संघ दाङ्ग, तिलगंगा आँखा अस्पताल लगायतको सहयोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिविरको आयोजना गरेको हो ।
Previousघोराहीमा कक्षा ८ को परिक्षा चैत्र ३ गते देखी
Nextभारतबाट फर्कदा पैसा लुटियो, दुबै खुट्टा गुम्यो